HomeWararka MaantaMurugada Dhaawac Halis ah Oo Gaadhay Musacchio Oo Ruxay dalka Spain – Video
Villarreal ayay xalay u ahayd habeen murugo iyo werwer kadib markii uu dhaawac halis ah gaadhay laacibka difaaca uga ciyaara ee Mateo Musacchio.
Difaacyahankan oo ordaya ayey lugtiisii dib u jeedsatay, waxaana toos loo arkayey lugtii hore u jeedday oo dhabarkiisa eegaysa, taas oo naxdin ku ridday intii garoonka fadhiday iyo intii telefishinnada kala socotayba.
Difaacyahankan oo u dhashay wadanka Argentine ayaa ay markiiba dhakhaatiirtu xaqiijiyeen in uu ka jabay jilibka oo lugtu kala wareegtay, waxaana lagu sameeyey qalliin degdeg ah, kaas oo ay dhakhaatiirtu ku sheegeen mid lagu guuleystay.
“Musacchio qalliin guuleystay ayaa lagu sameeyey caawa (xalay) cisbitaalka Cemtro Clinic ee magaalada Madrid kadib markii uu ka jabay jilibka lugta bidix.” Sidaas waxa lagu yidhi war-saxaafadeed lagu baahiyey website-ka kooxda Villarreal goor dambe oo xalay ahayd.
Warkan ayaa waxa kale oo lagu yidhi: “Soo kabashada ciyaartoygani waxay ku xidhnaan doontaa horumarka uu ka sameeyo dhaawaciisa.”
Villarreal waxay ka gaabsatay in ay qiyaasto wakhtiga ay suurtogalka tahay in difaaceedani garoomada ku soo noqdo, hase yeeshee, waxa la filayaa in muddo dheer aan garoomada lagu arki doonin.
Villarreal ayaa xalay barbar dhac 1-1 ah la gashay Getafe, waxaanay taasi ka dhigtay in ay kaalinta lixaad ee horyaalka Spain fadhiisato iyadoo leh 51 dhibcood, halka Getafe ay kaalinta 13aad ku jirto oo ay leedahay 36 dhibcood.
Villarreal waxa dib u dhigay ciyaarteeda dhaawacyo haleelay qaar ka mid ah ciyaartooyadeeda rigliga ah iyadoo ay ka maqan yihiin Bruno Soriano iyo Denis Cheryshev, waxaana hadda ku darsama Musacchio.
Kooxda Toddobaadka Ee Premier League
Khilaaf Culus Oo Ka Dhex Qarxay Ronaldo Iyo Benitez
23/07/2015 Abdiwahab Ahmed